မည်သည့်စျေးကွက်တွင်မဆိုအမြတ်အစွန်းငါးခု | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2010 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 24, 2013 Lange ကိုထောက်ပံ့ပါ
ကျွန်ုပ်၏ယခင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘ ၀ ၌ကုန်ပစ္စည်းများပြုလုပ်သောလူများနှင့်သူတို့ကိုရောင်းဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူများကြားဆက်သွယ်ရေးကွာဟမှုကိုတသမတ်တည်းအံ့သြမိခဲ့သည်။ အလုပ်ရှင်နှင့်လူမှုရေးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းသည့်အနေဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စျေးကွက်များအကြားကွာဟမှုကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အမြဲကြိုးစားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤကြိုးပမ်းမှုများသည်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ သို့သျောလညျးငါအလုပ်လုပ်ခဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေစဉ်အတွင်းငါအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အချို့သောတစ်လောကလုံးအမှန်တရားတွေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောအရာကိုအပေါ်ထိမိ။ လဲ။
ပထမအမှန်တရား အမှတ်တံဆိပ်အာရုံစိုက်ရှင်းပြသည် ဒီမှာ.
ဒုတိယအမှန်တရား အမျိုးအစားရာထူး, ကုမ္ပဏီများကစျေးကွက်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပုံကိုဖြစ်တယ်, စျေးကွက်အတွက်အနေအထားအောင်မြင်မှု dictate ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ဖော်ပြပါသည်ဤအယူအဆကိုရာထူးတစ်ခုစီ၏ဥပမာများနှင့်အတူတိုတောင်းသောရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ (စာရေးသူ၏မှတ်ချက် - ဤအမှန်တရား၏အခြေခံသည်ကျွန်ုပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်းဖတ်ထားသောစာအုပ်မှဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အကယ်၍ သင်ဤစာအုပ်သည်စာရေးသူဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ၊ ဤအရာသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိပါကကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေသည် ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးငါ့မူလရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရန်)
ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်မိုက်ခရိုဆော့သည်နေရာတိုင်းတွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ သူတို့၏ထုတ်ကုန်အများစုတွင်စျေးကွက်ဝေစုကိုပိုင်ဆိုင်ရုံသာမကစျေးကွက်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပါပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်လည်းအချို့သောဒေသများတွင်၎င်းတို့သည်ဒုတိယ၊ တတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထနေရာများဖြစ်သည်။ ဒါဘာကြောင့်လဲ အဖြေအပြည့်အစုံသည်ရှည်လျားပြီးလက်တွေ့ကျသော်လည်း၊ စားသုံးသူအဆင့်အဖြေသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အမျိုးအစားများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမဟုတ်ပါ။
ရိုးရှင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအားမည်သို့အမျိုးအစားခွဲခြားမည်။ Windows XP ကဘာအမျိုးအစားလဲလို့ငါမေးရင်မင်းကမင်းကို Operating System လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Operating System ဟာထုတ်ကုန်အတွက်အမျိုးအစားဖြစ်မယ်၊ Microsoft ကဒီအမျိုးအစားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွှမ်းမိုးထားလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ငါမင်းကို Zune တစ်ခုပြပြီးအမျိုးအစားကိုတောင်းတဲ့အခါမင်းကငါ့ကိုပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ် MP3 Player ကို။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကဒီအမျိုးအစားကို Apple အတွက်ရှုံးနိမ့်နေသည်။ ဘာကြောင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က Apple ကိုဒီလောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာယှဉ်ပြိုင်ဖို့ရွေးတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ နံပါတ်တစ်ကisရာမကြီးဖြစ်နေရင်တောင်မှနံပါတ် ၂ ကောင်းဖြစ်ဖို့လုပ်ရမယ့်ပိုက်ဆံရှိသေးတယ်။ တကယ်တော့အမြတ်အစွန်းရတဲ့ကဏ္ in တစ်ခုမှာကွဲပြားတဲ့ရာထူး ၅ ခုရှိတယ်၊ အကယ်လို့သင်အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာသိရင်
မည်သည့်စျေးကွက်အမျိုးအစားအတွက်အမြတ်အစွန်းငါးခုရှိပါတယ် စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်, ဒုတိယ, အခြားရွေးချယ်စရာ, ဖက်ရှင်ဆိုင်, ပြီးနောက် အမျိုးအစားအသစ်ခေါင်းဆောင်။ ဤရာထူးတစ်ခုစီတွင်ငွေရှာရန်နှင့်ကြီးထွားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ပြင်ပမှအကူအညီမပါဘဲတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ပြောင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အပေါ်ကပုံတွင်အနေအထားတစ်ခုစီသည်စျေးကွက်ရှယ်ယာအနေအထားနှင့်အရွယ်အစားကိုပုံဖော်ထားသည်။ သငျသညျကိုသတိပွုမိနိုငျသကဲ့သို့, အရွယ်အစားအလျင်အမြန်သေးငယ်တဲ့ရ။ ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရာထူးတစ်ခုစီသည်ယင်း၏ရှေ့မှောက်ထက်သိသိသာသာသေးငယ်သည့်အခါရာထူးပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ပြောင်းလဲခြင်းမှရရှိသောအမြတ်ထက်များစွာသာလွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခုအနေအထားတစ်ခုစီရဲ့ကွဲပြားပုံကိုကြည့်ရအောင်၊ နေရာတစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်ရအောင်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်၊ ကိုလာအမျိုးအစားကိုသုံးနိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကိုလူအများစုကကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။
ရာထူးတစ်ခုမှာ - စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်
ကိုကာကိုလာ, သင်တန်း, ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိပြီးသူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းဟာဒဏ္isာရီဆန်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့မှာ Pepsi မှာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိနေလို့စျေးကွက်ဝေစုကိုတကယ်ပိုင်ဆိုင်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကြီးထွားနိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာကစျေးကွက်သစ်ကိုဝင်ဖို့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုဖွင့်တာက Pepsi ကို Safeway ကထုတ်တာထက်သိသိသာသာဈေးချိုတယ်။
ရာထူးနှစ် - ဒုတိယ
Pepsi သည်အားကြီးသောဒုတိယအချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီးကိုကာကိုလာအတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာအဖြစ်အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ဒါဆိုသူတို့ဘယ်လိုကြီးထွားလာတာလဲ။ ကိုကာကိုလာကိုခွဲဝေယူခြင်းသည်စျေးကြီးပြီးခက်ခဲသည်။ သို့သော်တစ်နှစ်ခန့်အကြာတရုတ်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးဈေးချိုသည်။ သူတို့ကကိုကာကိုလာ၏အမျိုးအစားတိုးတက်မှုနှုန်း၏ချွတ်ရေးဆွဲ။
နိုင်ငံ၏အချို့ဒေသများတွင် RC Cola သည်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူး၊ သူတို့မှာနှစ်ခုကြီးမားတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းအားမရှိဘူး။ ဒါဆိုသူတို့ဘယ်လိုကြီးထွားလာတာလဲ။ byရိယာအလိုက်.ရိယာ။ ၎င်းတို့သည်ဒေသတွင်းသို့မဟုတ်ထူးခြားသည့်အဖြစ်မြင်နိုင်ပြီးတစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ကြီးထွားနိုင်သည့်သီးခြားလမ်းကြောင်းများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
ရာထူးလေး: The Boutique
ဂျုံးစ်ဆိုဒါသည်အဓိကကျသည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ Cola ကိုရောင်းကြပေမယ့်ဂျုံးစ်ကတော့ cola အကြောင်းနည်းတယ်။ Cola သည်ဖန်ပုလင်းများထဲတွင်ကြံကြံသကြား၊ တံဆိပ်ပေါ်တွင်အနုပညာလက်ရာများနှင့်စျေးနှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့်သာလာသည်။ ဤသည်သိသာဗိုလ်ကြီးဖို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းယှဉ်ပြိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်သူတို့သည်အမြတ်အစွန်းများပြီးသစ္စာစောင့်သိသည့်နောက်လိုက်များရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ Cola စားသုံးသူတွေရဲ့အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုဆီကိုအစွဲအလမ်းမထားဘူး။
ရာထူးငါးခု - အမျိုးအစားအသစ်ခေါင်းဆောင် (NCL)
အမျိုးအစားတစ်ခုကိုအနှောက်အယှက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ Red Bull နောက်ကွယ်မှစျေးကွက်ပါရမီမေးလိမ့်မယ်။ အင်ပါယာတစ်ခုလုံးကိုသူတို့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ လူတိုင်းကသူတို့ဟာ "ကိုလာ" မဟုတ်ဘူး၊ ဟုတ်ပါတယ် Red Bull သူတို့ထွက်စတုန်းက Coke နဲ့မယှဉ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အမျိုးအစားလို့ပြောနိုင်တယ်။ ထိုအဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Cola နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်သည်မဟုတ်လော သူတို့ဟာအမျိုးအစားအသစ်ကိုသုံးပြီးကိုကာကိုလာအနိုင်ရခဲ့တဲ့စတိုးဆိုင်တွေပေါ်မှာရောက်သွားတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ဟာ Coke (သို့) Pepsi တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
မေးခွန်းကောင်း။ ပြီးတော့အဖြေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။ မင်းရဲ့အနေအထားကိုသိရင်အမြတ်အစွန်းကိုဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရပ်နေသည်ကိုသင်မသိပါကသင့်အား ဖမ်းဆီး၍ မရသည့်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ကြိုးစားနေသည့်ငွေအမြောက်အများကိုကုန်ဆုံးမည့်စီးပွားရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသင်၏အနေအထားကိုသိရှိပြီးသည်နှင့်သင်၏အမြတ်နေရာများကိုကျောက်ချရပ်နားရန်စီးပွားရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးအမြတ်အစွန်းများများရနိုင်သည်။
23:2010 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 59
အမြဲသုံးသပ်ဖို့ကောင်းပြီး တင်ပြမှုကို အရမ်းသဘောကျတယ် - ကောင်းပြီ ပြီးပါပြီ၊ ငါက Boutique တစ်ယောက်ပါ🙂
24:2010 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 54 တွင်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုကတော့ – ဝယ်သူရှာနေတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး – သင်ဟာ မတူညီတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Jones သည် boutique/craft/premium sodas များတွင် အသာစီးရနေသော်လည်း coke ကိုကြည့်သောအခါ boutique သည် ထင်ရှားသည်။
အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။